Sim Card တစ်ကတ်ထဲဖုန်းကို ဖုန်းနံပါတ် ၂ ခု သုံးချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်း ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
Sim Card တစ်ကတ်ထဲဖုန်းကို ဖုန်းနံပါတ် ၂ ခု သုံးချင်သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Thursday, November 19, 2015 AndroidSimCard, IT No comments
ဆောဝဲမလို အင်တာနက်လိုင်းမလို ပိုက်ဆံမစားဘူး။ တကယ်အသုံးဝင်တာနော်။
ကျနော်တို့ဖုန်းထဲမှာ MPT Sim သုံးထားတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲတာ ဖုန်းကလည်း Sim တခုထဲသုံးလို့ရတယ် Telenor ကိုလည်းသုံးချင်တယ် အဲမှာ အခက်တွေ့ရောပေါ့။ ကဲဒါဆိုရင် အသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်း တွေ့ထားပါတယ်။ MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို Telenor ထဲမှာ အ၀င် Call လက်ခံလို့ရမယ်ဗျ။ အဲတာဆိုရင် Telenor Sim တခုထဲမှာ MPT ရော Telenor နံပါတ်ပါ နှစ်ခုလုံး အ၀င်ခေါ်လက်ခံလို့ရပြီဗျ။ လုံးဝ Free နော် ကျနော် လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြီး သုံးနေပါတယ်။ ဒီနည်းကို MPT မူရင်း Page ကနေ တင်ထားတာတွေ့လို့ စမ်းကြည့်တာ အဆင်ပြေလို့ ပြန်မျှဝေပေးတာပါ။ Ooredoo သုံးသမားတွေလည်း ယခုနည်းအတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ အတူတူပါပဲ။
မရှင်းမှာ စိုးလို့ အခုနည်းက MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို Telenor/Ooredoo နံပါတ်ထဲမှာ အ၀င် call လက်ခံလို့ရတဲ့နည်းနော်။ MPT Sim ကို ဖုန်းထဲကနေထုတ်ထားလည်း MPT ကို Call ရင် Telenor ထဲ ၀င်သွားမှာပါ။ အဲတာဆို Sim တကတ်ထဲဖုန်းက နံပါတ် ၂ ခုအ၀င်လက်ခံလို့ရပြီပေါ့။ အရမ်းအသုံးဝင်တာနော် ကဲအောက်ကနည်းအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြပါဗျာ အဆင်ပြေပါစေ။ ကျနော် ကိုယ်တိုင် စမ်းထားတာမို့ စိတ်ချလက်ချ ဒီနည်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကဲ စမယ်ဗျာ ---
- အရင်ဆုံး MPT Sim Card ကို ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားပါ။
- 1331ကို CF လို့ ရေးပြီး SMS ပို့ပါ။ ခနနေရင် SMS တခု ပြန်ဝင်လာပါမယ်။ အဲတာဆို စလို့ရပြီ။
- ကို့ရဲ့ MPT Sim မှာ ကိုသုံးချင်တဲ့ ကတ် Telenor/Ooredoo နံပတ်ကို *21*09×××××××××# လို့ရိုက်ပြီး Call နိပ်လိုက်ပါ။ ခနနေဆို Success ဖြစ်တဲ့ စာပြလာရင် အောင်မြင်ပါပြီ။ အဲတာဆို MPT Card ကို ထုတ်လိုက်လို့ရပြီ ခုနက ထည့်ထားတဲ့ နံပါတ် Telenor/Ooredoo Sim ကို ဖုန်းထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ အဲတာဆို အားလုံး အဆင်ပြေပါပြီ။
MPT နံပါတ်ပဲခေါ်ခေါ် Telenor နံပါတ်ပဲခေါ်ခေါ် ကိုထည့်ထားတဲ့ Telenor Sim ထဲမှာပဲ Calling ၀င်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာဆို Sim တခုထဲကို နံပါတ် ၂ ခုအ၀င် Call လက်ခံလို့ရပါပြီ။ ကျနော် လက်တွေ့ စမ်းထားတာမို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမပြောပါနဲ့နော်။ ဖုန်းနဲ့ ရေးတင်တာမို့ ပုံနှင့်တကွ မပြနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
MPT Sim ကဒ် ထည့်ပြီး 1331 သို့
CF OFF လို့ရိုက်ပြီး message ပြန်ရိုက်လိုက်ပါ ။
Call forwording ပြန်ပြုတ်သွားပြီး နဂိုကအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဆင်ပြေကြပါစေ။ ------------------- လင်း(စွယ်စုံ) Credit to www.linmss.org ★★★★★★★★★
▼ 2015 (1447)
အထူးသတင်း မြ၀တီကနေ MOU ၂ နှစ် Visaနဲ့လာတဲ့အခါ ( Up...
iOS 8 တွင် မြန်မာစာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ထည့်သွင်...
Hidden and Autoplayed Background Music!
နာက်ခံ၊သီချင်းထည့် ၊ စာတန်းထိုးနိုင်မယ့် Video Edi...
ကိုယ့်ရေးချင်တဲ့ ဘောလုံးအသင်းနာမည်နဲ့ နံပါတ်တွေကု...
ကြိုတင်ထွက်လာတဲ့ ၂၀၁၆ မြန်မာပြက္ခတိန် Myanmar Calen...
TEAM VIEWER 10 PREMINUM Crack File နဲ့ ပြန်တင်ပေးလ...
AIS Lava Iris 708 Firmware တင်နည်း (Rooted)
HUAWEI ဖုန်းအများစုတွင် ROOT စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင်...
Root အမျိုးမျိုး Myanmar font အမျိုးမျိုး myanmar ...
Samsung Tab3V SM-T116NU Stock ROM
မြန်မာ + ထိုင်း အခြေခံ စကားပြော အဘိဓာန်
Android Phone + Tablet ဖုန်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ Andro...
Memory Stick ပြုပြင်နည်း
Windows 8.1 all In One 32 Bit (4.4 GB)
အလွယ်ကူဆုံး ထိုင်းစကားပြော စာအုပ်
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ်-မလေး သုံးဘာသာ စကားပြောစာအုပ်
3BB .Wi-Fi စက်အသစ်တွေမှာ နာမည် နဲ့ Password ပြောင်...
Thongsook 13 (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Ashampoo Burning Studio 2016 v16.0.0.17 Full Versi...
ROOT Lenovo A7000 and install CWM Recovery
Sim Card တစ်ကတ်ထဲဖုန်းကို ဖုန်းနံပါတ် ၂ ခု သုံးချင...
ကာလာရောင်စုံနဲ့ ပြုလုပ်ပြီး ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ ပြုလ...
RonyaSoft CD DVD Label Maker-3.01.31-Keygen-Full
လူအသုံးများတဲ့ Mozilla Firefox မှာ Website တွေဝင်ရ...
iOS အတွက် Swipe keyboard
iOS9တွင် Spotlight Search မှ Eng – Myanmar Engli...
WinToUSB Enterprise 2.4 Full Keygen
Window OS မျိုးစုံအတွက် လိုင်စင် Re-Loader Activat...
မိမိ ဓါက်ပုံတွေနဲ့ Calender ဖန်တီးနိုင်တဲ့ Photo C...
OnePlus X ဖုန်းကို TWRP recovery အလွယ်သွင်းနည်း
OnePlus X ဖုန်း Android 5.1 Lollipop ကို Root လုပ်...
Huawei Ascend G730-U10 ဖုန်း Logo မှာပဲရပ်နေရင်ြေ...
♪ ဖုန်းကိုအသုံးပြုရပေါ့ပါးသွက်လက်လာစေမယ့် - Auto M...
♪ ရုပ်ပြောင်ဟာသပုံလေးတွေဖန်တီးချင်သူများအတွက် - FA...
♪ ဘောလုံးပွဲချိန် ၊ ရလဒ် ၊ သတင်း အားလုံးကိုစုံလင်စ...
3D Chess Game ကို မိမိဖုနျးမှာကစားလိုသူမြားအတှကျ -...
Sony Xperia ဖုန်းများအတွက် XperiFirm ကိုအသုံးပြုပြ...
♪ Android OS 5.1 အထက် Root ဖောက်နိုင်တဲ့ (One Clic...
Android Device တွေကို ပေါ့ပါးစေတဲ့ BusyBox Pro v30...
Root တွေကိုရှင်းလင်းပေးမဲ့ Root Cleaner v5.1.0 Cra...
Google Play Store v6.0.0 Original+Cracked APK (Upd...
ပုံတွေကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ PicsArt -...
ဖုန်း ဗီဒီယို ကာရာအိုကေ စာတန်းထိုး နှင့် Video တည်...
ဖုန်းတွေထဲကို Virus မ၀င်ဖို့နဲ့ဖုန်းရဲ့လုံခြုံစေမယ...
အင်္ဂလိပ်စာနှင့်စကားပြောတို့သင်လိုသူများအတွက် - VOA ...
The Transporter Refueled 2015 မြန်မာစာတမ်းထိုး
OPPO R1001 Firmwareတင်နည်း(Only Mobile)
English For Office Staff APK
YGDP Tool ကိုကွန်ပျူတာမှာ Install ပြုလုပ်နည်း
ဖုန်းတွေမှာ အကောင်းဆုံး Launcher တစ်ခုဖြစ်တဲ့-Next...
Universal ADB Driver ကိုကွန်ပျူတာတွင် Install ပြုလ...
"မြန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံတကာအဆင့် mobile network un...
How to root Samsung Galaxy J7 (J700F) ????
USB Drive ထဲ ကို Virus မ၀င်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ???...
Iobit Smart Defrag 4.3.0.926 Free
DVD Cloner 2016 Full Crack
CyberLink.AudioDirector.Ultra.6.0.5902.0 Full + Ke...
ဒေါင်းခြင်တာအမြန်ဒေါင်းနိုင်တဲ့ - Internet Downloa...
ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ဇာတ်ကားသစ်လေး - 007 SPECTRE 2015 HD ...
Rooted Device များတွင် Kinguser ကို SuperSU အဖြစ်အ...
Blogger တွင် ZawGyi နှင်. Unicode Font များကို Emb...
ဘလော့မှာ Zawgyi-One နှင့် Unicond ပြောင်းလို့ရတဲ့ ...
ဓာတ်ပုံကို အလန်းစာအမိုက်စားEffect တွေနဲ့ ရိုက်/ပြု...
LG G3 Android 4.4.2 ကို Root အလွယ်ဖောက်နည်း
Hard Disk Sentinel Pro v4.60.13 Build 7377 Beta Wi...
OpenCloner UltraBox 1.80 Build 217 Full Crack
Desktop ပေါ်မှာ HUD Red Skin Pack အနီရောင် Theme အသ...
♪ ရွှေအိုရောင် Batter Saver လှလှလေး - Deep Sleep Ba...
♪ ဖုန်းထဲမှာတင်လွယ်ကူစွာ Rootဖောက်နိုင်တဲ့နာမည်ကြီ...
♪ Facebook Version အားလုံးမှာ Video များကို 100%ေ...
♪ OfficeSuite 8 + PDF Editor Premium v8.4.4436 Apk...
Samsung Galaxy Grand Prime LTE ဖုန်း 4.4.4 KitKat ...
Samsung Galaxy Grand Prime LTE (SM-G530Y) Android ...
Windows 10 တွင် boot error ပြသနာများကိုဖြေရှင်းနည်...
♪ “Android အတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတည်းဖြတ် ဆော့ဖ်ဝ...
LG Devices များအတွက် One-Click Root Script နဲ့ အသံ...
ReviverSoft Registry Reviver 4.4.1.10 Full Crack
ကြော်ငြာဗိုင်းရစ်တွေကို သတ်ပေးမည့် Ghost Push Toja...
Cydia Impactor ကိုအသုံးပြုပြီး Android Device အားလ...
Android AOTO phoneAOTO official site အင်တာနက်မှာ ရ...
၂၀၁၄-၂၀၁၅ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်( သထုံ) အောင်စာရင်းများ...
Tweaking.com - Windows Repair 3.6.3 [17.56MB]
ဖုန်းအားကြာရှည် အသုံခံပြီးအားအမြန်ဝင်စေမယ့် - Batt...
Internet Download Manager 6.25 Build2Full Versio...
Honor 4X (Che2-L11) Full B310 5.1 Lollipop Firmwar...
Huawei Y6 B130 Android 5.1.1 Lollipop Firmware တင်...
Huawei P8 Lite (L21) B150a Lollipop Update တင်နည်း...
Galaxy Star Pro or Plus ဖုန်းများကို TWRP သွင်းနည်...
T-Mobile Galaxy Note5SM-N920T Official Stock Rom...
Sony Xperia Z5 Compact ကို Root လုပ်နည်း
HTC Desire C ကို ကွန်ပျူတာမလိုပဲ Root လုပ်နည်း